Football Khabar » अन्ततः नेइमारले पिएसजीसँग ‘डिभोर्स’ गर्ने !
अन्ततः नेइमारले पिएसजीसँग ‘डिभोर्स’ गर्ने !
दुई वर्षअघि फ्रेन्च क्लब पिएसजीमा अनुबन्ध भएका ब्राजिलियन स्टार नेइमार क्लब छाड्ने मोडमा पुगेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यस्तो रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन् ।
२७ वर्षीय नेइमार सन् २०१७ मा स्पेनिस बार्सिलोनाबाट विश्वकीर्तिमानी २२२ युरोमा पिएसजीमा अनुबन्ध भएका थिए । तर, दुई सिजन पेरिसमा बिताउँदा पनि ठूला उपाधि जित्न नसकेपछि नेइमार निराश छन् ।
पहिलो र दोस्रो सिजन नै लगातार चोट र प्रतिबन्धबाट गुज्रिएका नेइमार यसबाट अझै बढी चिन्तित छन् । नेइमार पहिलो सिजन तीन महिना चोटबाट गुज्रिए भने दोस्रो सिजन पनि तीन महिना चोटसँगै पटक–पटक प्रतिबन्धमा परे । जसले नेइमारको पिएसजीमा भविष्य करिब असफल नै तुल्याइदियो ।
पिएसजीमा रहेर आफ्नो भविष्य नदेखेपछि नेइमारले अघिल्लो सिजन नै क्लब छाड्न चाहेको चर्चा थियो । तर, त्यसबेला उनलाई बेच्ने कुरामा क्लबले सोझै इन्कार गरिदियो ।
यो सिजन पनि लामो समय चोटबाट गुज्रिएका नेइमार तीन महिनापछि ठीक हुँदै मैदान फर्किए पनि प्रतिबन्धमा परे । त्यसपछि राष्ट्रिय टिममा पुगेका उनी घाइते भएपछि कोपा अमेरिकासमेत गुमाउँदैछन् । उनी टोलीबाहिर भइसकेका छन् ।
खास गरी पिएसजीमा फ्रेन्च युवा फरवार्ड केलियन एमबाप्पे उदाइरहेकाले नेइमार कहीं न कहीं त्यसको मारमा परेका छन् । क्लबबाट व्यक्तिगत अवार्डमा एमबाप्पे अघि आउन थाल्नु र आफू लगातार समस्यामा पर्नु नेइमारले पिएसजी छाड्ने मुख्य कारण देखिन्छ ।
यता, पूर्वक्लब बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सी पनि पूर्वसहकर्मी नेइमारलाई बार्सिलोना फर्काउन इच्छुक छन् । पुनः स्पेन फर्किन मेस्सीको साथ पाउने भएपछि पनि नेइमारले क्लब छाड्ने मनस्थिति बनाएको बताइन्छ ।
केही समयअघि एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै मेस्सीले नेइमार बार्सिलोना फर्किए आफू खुसी हुने बताएका थिए । उनले नेइमार बार्सिलोनाका लागि एकदमै फिट खेलाडी रहेको भन्दै बार्सिलोना उनका लागि उचित क्लब रहको बताएका थिए ।
यता, स्पेनकै क्लब रियल मड्रिड पनि नेइमार भित्र्याउन लागिपरेको छ । गत सिजनबाटै रियलका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो परेजेले नेइमार भित्र्याउन चाहेका छन् । तर, पिएसजी नेइमार बेच्न तयार नभएपछि रियलले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । अझै पनि रियल पिएसजीबाट सके नेइमार नत्र एमबाप्पे भित्र्याउने योजनामा छ ।
केही समयअघि मात्रै पिएसजीका प्रमुखले एक अन्तर्वार्ताामा बोल्दै नेइमार ‘बिक्रीमा नरहेको’ भन्दै अर्को सिजन पनि उनी पिएसजीमै रहने बताएका थिए ।
प्रकाशित मिति २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १५:३७